Maxay tahay in maskaxda lagu hayo marka la dhiso dib-u-habeyn dhab ah oo loogu talagalay barnaamijka ugu sarreeya SEO?
Looma baahna in la dhiso dhisme dhab ah oo loogu talagalay SEO habka saxda ah waxa jira waxyaabo qarsoon in lagu hayo maskaxda kasta oo kasta oo ku yaal webmaster iyo milkiilaha goobta. Taasi waa run, inta badan sababtoo ah geeddi-socodka oo dhan oo abuuraya dib-u-habboon oo macquul ah oo aan waligeed waxyeeleynin qiimeyntaada ayaa leh tallaabooyin badan iyo dhinacyo. Iyo waliba inta badan iska ilaalinta waxyaabo miro-dhal ah oo caddaynaya in ay noqdaan kuwo aad u dhib badan marka loo eego inta badan ee aan ka fekereyno. Taasi waa sababta hoosta aan u socdo si aan kuu tuso qaar ka mid ah dabiicadaha ugu badan ee ku saabsan dhismaha xiriirka tayada. Ogow wixii laga yaabo in laga fogaado qiimaha oo dhan - ama ugu yaraan si dhakhso ah loo dhigo si sax ah markaad ku aragto boggaaga ama bloggaaga. Waxaan ula jeedaa khaladaadadan soo socota si sahal ah ayay u noqon kartaa xitaa dhabarkaaga ugu habboon ee aad ku haboon tahay guntin aan faa'iido lahayn - ugu dhawaan. Maxaa badanaa - marka ay timaaddo xagjirnimada, kaliya hal link "sun ah" waxay u gaabin kartaa inay saameyn ku yeelato waxqabadkaaga SEO ee dheer.
Waxaad ka fiicnaan laheyd ugu yaraan fiiro kooban halkan. Ha ka boodin qaladaadahan - kaliya weydii haddii aad runtii haysato wax kasta, iyo boggaaga ama blog-kaaga marnaba lama xiriiri doono:
bogagga ama blogyada oo leh sumcad xun ama xitaa laga shakiyo (maaha in la xuso kuwa horay loo mamnuucay indexka Google);
ilo aan la socon, ama meel kasta oo xiriir la leh warshadaha ugu badan ee spammamyada, sida sino, khamaarka, ama farmashiga;
ilo-dhinac saddexaad oo raadinaya sida shabakadaha internetka, blogs, ama forumyada laakiin leh taariiqyo muuqaal ah oo muuqaal ah oo ku jira boggooda gaarka ah, ama u siinaya iibka iyo / ama is-beddelka.
Wax kasta waa inay ahaadaan is-sharaxaad, halkaas oo codsiga mid kasta oo ka mid ah xulashooyinka la soo sheegay aad u badan tahay inaad waxyeelo u geli karto qiimeynta baaritaankaaga hadda, halkii aad ku raaxaysan lahayd wax kasta oo la qiyaasi karo ee istiraatiijigaaga SEO miisaanka. Marka aan xitaa wax ka dhigno waxyaabihii u cadaa inaan si cad u cadeeyn, hoosta, waxaan rabaa in aan tilmaamo labadaba khatarta ugu badan ee aan weli qallafsaneyn. Marka ay timaado dhisida dhabarka dhabta ah, halkan waxa ay inta badan dilaan ciyaarta:
oo ha u isticmaalin habab-ku-mugdi ah. Waxaan si xoog leh ugu talineynaa in si qotodheer looga dhigo mawduuca, sababtoo ah kantarooliyada adag ee ganacsiga oo si muuqata u eega si dabiici ahaan ah ayaa kor u qaadi kara natiijooyinkaaga. Xaqiiqda foolxumadu waa in qalad gebi ahaanba qaldan ama xitaa qaybta qoraalka ah ee khaladka leh ay kuugu jeesan karto si fiican oo ku haboon dhabarkaaga sababaha dhabta ah ee dhibcaha darajada, ama xitaa xajmiga gacanta. Isticmaalka Qalab aan Diidaneynin / Qodobbada Leh
Sida hore, arrintani waxay u baahan doontaa Daraasad qoto dheer oo dheeri ah. Dabcan, dhabarka dhabta ah ee DoFollow wuxuu dhab ahaantii dabooli karaa baahiyaha SEO ee miisaanka. Isla mar ahaantaana - haddii aad wax ka qabanaysid ama aad u yar tahay iyaga - wax waliba waxay u badan tahay inuu ku dambeyn doono natiijooyinka cakiran.
U fidinta xeel dheer
Aynu wajahno - xitaa haddii aad haysato nasiib wacan oo aad ku aragtid ilo badan oo wanaagsan oo la isku halleyn karo Xiriirinta, waa inaadan waligood degdegin - inaad isticmaasho dhammaan fursadaha cusub saacado badan ama habeenkii. Iyo wax kasta oo kor u kaca - tayada xidhiidhka ama tirada - ma hubo in wax lagu ammaano. Xasuuso, dhisida xiriiriyaal khuseeya oo si joogto ah ugu adeegi doona waxqabadkooda ugu wanaagsan ee SEO - ayaa ah wax walba oo ku saabsan dheelitirka Source . Weligaa ha ka waaban inaad isweydiiso mar kale: Miyuu wax walba u eegaa si dabiici ah? Ma ku qaadatay wakhti kugu filan inaad soo qaadato ilo sax ah? Ma hubtaa wax walba oo ku saabsan dhabarka dambe ee la hayo oo lagu sameeyey oo kaliya ujeedo cad?